XOG: Wakiilada Beesha Caalamka oo bilaabay inay si toos ah uga hor yimaadaan Maxamed Farmaajo | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa bilaabay inay si toos ah uga hor yimaadaan Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo, iyadoo si toos ah u cambaareynaya joogistiisa xukunka iyo tallaabooyinka uu qaadayo.
Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga ayaa bartiisa Twitter-ka uga jawaabay arrinta Heshiiska C/rashiid Janan, wuxuuna yiri: “Waxaan murugada la wadaagayaa dhibaneyaasha, dadka barakacay, dhalinyarrada Soomaaliyeed ee hiigsanaya bulsho nabad iyo cadaalad ku dhisan oo sharcigu u siman yahay qof walba. Waxaan hubaa kuwa ku fikiraya guulaha muddada gaaban inaysan iloobi doonin bulsho u baahan tiirar adag si mustaqbalka loo dhiso”.
Jawaabta Nicolas Berlanga waxay soo baxday iyadoo safiirka Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yılmaz uu bilaabay dhaqdhaqaaq aan hore loo arag, xiriirna la sameeyay madaxweynayaasha Puntland Siciid C/llaahi Deni iyo Juballand Axmed Maxamed Islaam.
Kulamada oo kala gaar ahaa, isla markaana khadka Internet-ka ee ZOOM-ka ku dhex maray safiirka Turkiga, Axmed Madoobe iyo Siciid Deni ayaa looga dooday kaalinta Turkiga ee xaaladda Soomaaliya iyo welwelka laga qabo awoodda ciidan ee uu adeegsanayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Safaaradda Norway ayaa dhinaceeda soo saartay qoraal culus oo Madaxweyne loogu baaqay inuu xilka si nabad ah ku wareejiyo, qoraalkaan oo ay si weyn uga caroodeen Farmaajo iyo taageerayaashiisa, kadibna safaaradda ay fasir ka bixisay.
Kuxigeenka Madaxda Midowga Yurub u qaabilsan Siyaasadda iyo Amniga ayaa qoraal adag ugu sheegay madaxda dowladda federaalka inay wajigi doonaan tallaabo laga qaado haddii ay caqabad ku noqdaan Doorashada.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa xaqiiqsaday in Maxamed Farmaajo caqabad ku yahay doorasho xor ah oo Soomaaliya ka dhacda, balse uu wado qorsheyaal farsameysan oo uu dib loogu dhigayo Doorashada; laakiin waxay u arkaan inuu fursad ka helayo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo shuruudo ku xiraya wadahadalka ay doonayaan in la galo.
Previous articleSaddex tallaabo oo looga badbaadi karo Inqilaabka Farmaajo (Akhriso: Qormada C/raxmaan C/shakuur)
Next articleKutlada xildhibaannada labada Aqal ee Mucaaradka oo digniin Culus u diray Farmaajo & Maxamed Mursal